မြန်မာနိုင်ငံရှိ Toyota မော်တော်ကားများ များ | Ads.com.mm
မြန်မာနိုင်ငံရှိ toyota မော်တော်ကားများ
မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုယိုတာနှင့် အခြားဇိမ်ခံကားမော်ဒယ်ကြော်ငြာများ
သင်နေထိုင်ရာမြို့တွင်းအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ အကောင်းဆုံး၊ ဈေးအတန်ဆုံးဖြစ်သော တိုယိုတာကားအဟောင်းနှင့် အခြားတန်းမြင့်ကားများအား ရောင်းချသော ကြော်ငြာများ ကိုရှာဖွေ တွေ့ရှိ နိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ရှာဖွေနိုင်သလို သင်၏ကားအဟောင်းကိုလည်း တန်သင့်သောအကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း ရရှိစေရန်အတွက် အခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်ခနှင့် ကော်မရှင်ခတို့ပေးသွင်းစရာမလိုပဲ Ads.com.m မှာကြော်ငြာတင်နိုင်ပါတယ်။ ကားအသစ်ဝယ်ဖို့ရှာဖွေနေရုံသက်သက်ပဲလား? ဒါဆိုရင်လည်း သင့်အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ တိုယိုတာနှင့်အခြားသောတန်းမြင့်ကားအမျိုးအစားတွေကိုရှာဖွေဝယ်ယူနိုင် သလို ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုလည်း များပြားစုံလင်စွာဖြင့်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁၉၃၆ ခုနှစကတည်းစတင်၍ တိုယိုကားကုမ္ပဏီမှာ ဆန်းသစ်သောမော်တော်ယာဉ်နှင့် အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတို့ ဖန်တီးမှုတွင်ရှေ့ဆုံးမှပါဝင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အခါတွင်လည်း ဆီးစားသက်သာပြီး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုဦးစားပေး သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတအဖြစ်ဆုံးကားများကို ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်လျှက်ရှိ သည်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံတွင်ဖြန့်ကျက်ရောင်းချလျှက်ရှိသောဤကုမ္ပဏီကြီးမှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုတိုးတက်ကြီး မားလာနေပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေကြသောနာမည်အကြီးဆုံးကားမော်ဒယ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ဆီဒန်းအမျိုးအစားကားငယ်လေးများမှစ၍ ဖက်စပ် ဇိမ်ခံကားများနှင့် အတူ ဆီနှင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးကားများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် အဆိုပါဂျပန်ကားကုမ္ပဏီကြီးသည် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သောမြို့တွင်းမောင်းမှုအတွက်သေသပ်သောဒီဇိုင်းတို့နှင့် တည်ဆောင်ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာသောဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ ယနေ့ခေတ်အခါ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌လည်ပတ်လျှက် ရှိနေသော ၁၉၆၀ မှဒီဇိုင်းများဖြင့် တိုယိုတာကားရာပါင်းများစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးမောင်းနှင်မှုပိုင်းဆိုင်ရဒီဇိုင်းများ၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအလေးထားမှုအဖြစ် ဆီစားသက်သာမှု၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးမှုတို့အပြင် ကားတွင်းပိုင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစွမ်းဆောင်ချက်များဖြင့် တိုယိုတာအမှတ်တံဆိပ်မှာ ခေတ်ရေစီးကြောင်း နှင့်လိုက်ဖက်ညီသော ကားထုတ်လုပ်သူအဖြစ်မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ မော်ဒယ်တစ်ခုစီအလိုက်ရှာဖွေနေပါသလား? တိုယိုတာ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည့်ကားများဖြစ်သော Probox, Caldina တို့ သို့မဟုတ် ပြင်ပကိုယ်ထည်ကောင်းမွန်လှပြီး မြို့တွင်းမောင်းနှင်ရန်သင့်သော Wish, Crown, Alphard နှင့် Hilux တို့ကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ရွေးချယ်ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်သည်။ မည်သည့်ကားအမျိုးအစား ကိုမဆို Ads.com.mm တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Rav4: လမ်းကြမ်းမောင်းနှင်သောယာဉ်တစ်စီး၏စွမ်းဆောင်နိုင်ချက်များကို Rav4 ကားတစ်စီးမှ အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်သည်။ လမ်းကြမ်းမောင်း SUV ယာဉ်အများစုထက် ပိုမိုပြေပြစ်နိမ့်ဆင်း သောကိုယ်ထည်ဖြင့် Rav4 သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းဖက်စပ်ယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ပြီး လမ်းကြမ်းမောင်း နှင်နိုင်သလို မြို့တွင်းလမ်းများပေါ်မောင်းနှင်ရာတွင်လည်း ကွဲပြားထွက်မနေပဲပနံသင့်သောကားဖြစ်သည်။ ရှေ့ယက်အမျိုးအစားဖြင့်ရရှိနိုင်သလို ကြမ်းတမ်းခက်ခဲသောလမ်းကြောများမောင်းနှင်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် 4x4 လေးဘီးယက်အမျိုးအစားဖြင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။ ဒေသတွင်းတွင် သိန်း ၁၇၀ မှ ၂၀၀ ပတ်ဝန်းကျင် ပေါက်ဈေးဖြင့် Rav4 မော်ဒယ်များကို လိုက်လံရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်သည်။
Land Cruiser: အကြမ်းပတမ်းခံပြီးခိုင်ခံ့သော Land Cruiser ကားမှာ သင့်စိတ်ကြိုက် လမ်းကြမ်းမောင်းနှင်ရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်စိတ်ချရသော လေးဘီးယက်ကားမော်ဒယ်ကို သေသပ်သောကိုယ်ထည်နှင့်အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုများအပြင် အန္တရာယ်ကင်း ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အသုံးဝင်သောရုန်းအားနှင့် မောင်းနှင်သူအတွက်လွယ်ကူသော စတီယာရင်းစနစ် တို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ Land Cruiser ကားများအတွက် တန်ကြေးမှာမူလွန်စွာကွဲပြားနိုင်သည်။ ယခင် Classic မော်ဒယ်နှင့် အဟောင်းများမှ သိန်း ၂၀၀ မှ ၃၀၀ ထိရှိနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကားများအတွက်မူ သိန်း ၁၀၀၀ နှင့်အထက်တန်ကြေးပေးရလေ့ရှိသည်။
Mark ll: တိုယိုတာ၏ အအောင်မြင်ဆုံးဆီဒန်းကားအမျိုးအစားဖြစ်သော Mark ll မှာ ဇိမ်ခံကားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများအတွက်သင့်တော်ပြီး လူများမှ လေးစားအားကျ လောက်သော လွယ်ကူသည့် စတီယာရင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ ၀ မှ ၆၀ မိုင်အတွင်းသို့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိစေ နိုင်သော အလွန်အားကောင်းသည့်အင်ဂျင်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ဈေးနှုန်းအနေဖြင့်လည်း Mark II ဆီဒန်းကား ဟောင်းတစ်စီးမှာ လူအများတတ်နိုင်စေလောက်သောဈေးနှုန်းဖြစ်သည့် သိန်း ၂၀၀ မှ ၃၀၀ ဝန်းကျင်အတွင်း၌ သာရှိသည်။
ကားအရောင်းဆိုင်များနှင့်ရောင်းချသူများကို ပရီမီရမ်ကြေးပေးသွင်းရသည်ကိုစိတ်ပျက်နေပါသလား? Ads.com.mm မှာ သင့်အနီးအနားမှာရောင်းဖို့ရှိနေတဲ့ အံ့သြလောက်စရာဈေးနှုန်းများဖြင့် တစ်ပတ်ရစ် တိုယိုတာကားအဟောင်းများရောင်းချတဲ့ကြော်ငြာများကိုရှာဖွေ ပြီးအရောင်းအေးဂျင့်၊ ပွဲစားများနှင့် စိတ်ရှုပ်ခံ ပြောဆိုနေရသည်များကိုဖျက်ချလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲကကားတစ်စီးကို တစ်သက်တာတွင် အလွယ်ကူ ဆုံးရှာဖွေနိုင်မည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်ပထမဆုံးအွန်လိုင်းမှဝယ်ယူခြင်းဖြစ်နေပါ သလား? သင့်အနေဖြင့် လွယ်ကူလျင်မြန်သောဝယ်ယူတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှယုံကြည်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံပြီး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့၊ စိတ်တိုင်းကျကျေနပ်မယ့်ဝယ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက် အနည်းငယ်ကို အချိန်တိုင်းလိုက်နာပေးရုံပါပဲ။
သင့်အနေဖြင့်မည်သူ့ထံမှဝယ်ယူဖြစ်သည်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ ကားကိုကြော်ငြာတင်ရောင်းချသူကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အဆိုပါလူမှာ ကားကိုအမှန်တယ်ပိုင်ဆိုင်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ် လေ့လာသင့်ပါတယ်။
ဒိုင်ခွက်များအတွင်းမှ မိုင်ပေါင်း၊ အတွင်းခန်းနှင့် ဘောနက်ဖုံးအတွင်းတို့ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကားရဲ့ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလက်လွှတ်စပယ်သာစစ်ဆေးဖြစ်ပါက နောက်ပိုင်းကျရင်သင့်အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ လက်မှတ်သက်သေအထောက်အထားပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်။ ကားလိုင်စင်၊ ဝှီးတက်စတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းလက်ဝယ်ရရှိအောင်သေချာဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ ဝယ်ယူကြောင်း စာချုပ်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကားအသစ်ကို စက်ပြင်ဆရာတစ်ယောက်နဲ့စစ်ဆေးပါ။ အထူးသဖြင့်နှစ်ဖက်စီမှမဟုတ်ပဲ ပြင်ပ တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ဖက်ကနေလည်းကြိုတင်လေ့လာမှုတွေလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှနေ၍ သင်လိုချင်တဲ့ကား အကြောင်းကိုလေ့လာဖတ်ရှုပြီး ကြော်ငြာတွင်ပါဝင်သောအချက်အလက်များဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကွဲပြားချက်တွေ အားလုံးကိုမှတ်သားထားပြီး ရောင်းချသူနဲ့အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ မေးမြန်းဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ကားအဟောင်းတစ်စီးကိုရောင်းချရာမှာ ဈေးကောင်းရဖို့အနည်းငယ်တော့ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ Ads.com.mm တွင်ကားကိုသင်၏သဘောအတိုင်းကြော်ငြာရောင်းချရန်အတွက်ရိုးရှင်းလှပြီး သင်ရောင်းချလိုသောဈေးနှုန်းကိုပေးနိုင်တဲ့ ဝယ်လိုသူတွေဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးတာကြောင့် ဈေးနှုန်းကို စိတ်ကြိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချခြင်းကသင့်ကို ဝယ်လိုသူထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ထိတွေ့စေနိုင်တာကြောင့် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာရောင်းချစေနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့အကောင်းဆုံး ဈေးကိုရရှိချင်ရင်တော့ ရောင်းချမှုပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ယုံကြည်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုတည်ဆောက်ပါသင်၏ကြော်ငြာကိုဖတ်ရှုသူများအား ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပေးနိုင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်ရှင်းလင်းစွာရေးသားဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ သင်အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့သောကားမျိုးကိုရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ကြောင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောပြနိုင်ရန်လိုအပ်သဖြင့် သင့်ရောင်းချ မည့်ကားအကြောင်းကိုလေ့လာဖတ်ရှုထားပြီး ပုံမှန်မော်ဒယ်တစ်စီးထက် သာလွန်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက် များကို မရေရာမကွဲပြားမှုမရှိပဲ တိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ရပါမယ်။ ကြီးမားတဲ့လွဲမှားဖော်ပြချက်တစ်ခုက ဝယ်ယူ လိုသူကိုစိတ်ပျက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံများကို အားသာချက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချပါအွန်လိုင်းမှဝယ်ယူခြင်းတွင် အားသာချက်များစွာရှိသော်လည်း အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ဝယ်ယူသူအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းသိရှိလေ့ လာနိုင်မှုနည်းပါခြင်းဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသူများအတွက် အသုံးဝင်သည့်သင့်ရောင်းချသောကား၏ အတွင်း၊အပြင် ဓာတ်ပုံမျိုးစုံကိုထည့်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့အနေဖြင့်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနိုင်သည်။ ကား၏အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းများကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ၊ အသေးစိတ်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများ များနိုင်သမျှများများထည့်ပေးသင့်သည်။
တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းကား၏ရာဇဝင်နှင့်မပက်သက်သော အချက် အလက်များမှလွဲ၍ ဝယ်ယူသူအနေဖြင့်သင့်၏ကြော်ငြာအပေါ်တွင် မေးမြန်းလာနိုင်သောမေးခွန်းများအတွက် အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသင့်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မေးခွန်းများအပြန်အလှန်ဖြေကြားရှင်းလင်း၍ အချိန်ကုန်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသလို ရောင်းဈေးကိုတစ်ဆက်တည်းပေးချေဝယ်ယူလိုသော ဝယ်ယူသူကိုမြန် မြန်တွေ့ရှိစေနိုင်သည်။